Ungasarudza sei multimeter: matipi ese aunoda kuziva | Mahara emahara
Nzira yekusarudza multimeter: matipi ese aunoda kuti uzive
Isaac | | Zvemagetsi zvigadzirwa
Una yezvishandiso zvinoshandiswa zvakanyanya munyika yemagetsi nemagetsi, kunyanya nevanyanzvi uye vagadziri, ndizvo iyo multimeter kana multimeter. Chinhu chinotendera kuyera huwandu hwakawanda uye kuita Chekutanga macheki erudzi urwu maseketi.
Panguva ye enzanisa multimeter uye sarudza chakanyanya kukodzera, havasi vese vanojekesa kudaro. Naizvozvo, kana iwe uchida kuisa mari yako mushe uye uve nechakanaka chinhu chiri chehunhu uye chakaringana mumiyero yayo, iwe unofanirwa kutarisisa kune ino gwaro uko zvakavanzika zvese zvinoratidzwa ...
1 Chii chinonzi multimeter?
1.1 Mhando dzemultimeter
2 Mashandisiro ekushandisa multimeter
3 Nzira yekusarudza multimeter
3.1 Yakurudzira multimeter
Chii chinonzi multimeter?
Un multimeter, tester kana multimeter, mudziyo wemagetsi unobvumidza huwandu hwemagetsi hwakasiyana kuyerwa mumatunhu eAC / DC. Semuenzaniso, unogona kuyera voltages, kusimba, masimba, kusagadzikana, kugona, nezvimwe. Zvimwe zvinosanganisira zvakare mamwe mabasa sekutarisa ma transistors, maseketi akavhurika (kuenderera), nezvimwe. Ndokusaka ivo vachizivikanwa se poly kana akawanda, nekuti ivo vanogona kuyera zvinhu zvinoverengeka.
Aya marudzi e multimeter ane akati wandei zviyero zvekuyera mukati, zvakarongedzwa kuitira kuti vakwanise kupa zviyero zvese zvinotsigirwa. Ndokunge, iwo ane voltmeter, ammeter, nezvimwe. Uye zvakare, ivo vanotsigira kusarudza kuwanda kwakapetwa kana zvimisikidzo zvehuwandu hwakatsigirwa kuti vakwanise chiyero chakaringana
Kuti utore zviyero, une tambo ne mamwe ma probes nekubatana kunoitwa kuti ugone kuyera hukuru hwakasiyana hwedunhu.
Nhare nhema (-): ndiyo inonzi COM kana yakajairika. Ndiro rinoshandira hukuru hwese.
Tsvuku tsvuku (+): iyo imwe tambo ichave yakabatana nepini pamwe nesangano rehukuru hunofanira kuyerwa, semuenzaniso, kuyera magetsi iwe unofanirwa kutsvaga pini inoratidza V, kana kuyera kusimba A, nezvimwe.
Kana izvi zvangoitwa uye musarudzwi aiswa panzvimbo yehukuru hwakakodzera kuyerwa, kubata dunhu kunoratidza kukosha kwe kuyerwa pachiratidziri.
Pane mhando mbiri dzakakosha Izvo iwe zvaunofanirwa kuziva kana iwe uchida kusarudza multimeter:
Analog: Ivo vakura uye vanowanzoita echinyakare, kunyange hazvo vachiwanzosarudzwa nenyanzvi nekuda kwekururama kwavo uye nekuvimbika. Kuratidza mhedzisiro, ivo vane skrini ine chikero uye tsono inoratidza chiratidzo.
Digital: Iwo azvino mazuvano uye ari nyore maererano nekushandisa, sezvo vaine LCD skrini kuratidza zviwanikwa. Iwo anowanzo kuve anodikanwa kune vazhinji, kunyanya kune vanotanga. Ivo zvakare vanoyera nekururama kwakanaka, asi wedzera kunyatsoita kana uchiverenga zviyero nekuratidzira kukosha kwenhamba.
Chero mhando iyo iri, iwe unofanirwa mira zvishoma, sezvo kukosha kwacho kuchizoramba kwakadzikama pachiratidziro kusvikira mushure menguva diki. Naizvozvo, iyo yekutanga kukosha iyo inoonekwa inogona kunge isiri yakanyanya kunaka.
Mashandisiro ekushandisa multimeter
Uchishandisa multimeter zviri nyore. Zvese zvinoenderana nehukuru hwaunoda kuyera. Kazhinji commons ndeiyi:
Voltage kana voltage: pamusoro pekuisa tambo tsvuku paV plug uye anosarudza pane yakakodzera unit (mV, V, kV ...), zvichienderana nechiratidzo chauri kutarisa (semuenzaniso, hazvina kufanana kuyera dunhu reDC rine ma voltages akakwirira kwazvo). yakaderera kune tambo yemagetsi yeimba iri mu220V approx.). Kana yangove yagadzirira, sarudza matemu maviri kana mapoinzi pakati paunoda kuyera iyo ingangoita kana mutsauko wemagetsi uye icharatidzwa pachiratidziri. Rangarira kushandisa waya nhema yevhu / pasi.
Resistors: zvakare iwe unosarudza mune yakasarudzwa iyo unit yeanopikisa uye chiyero chakakodzera, pamusoro pekubatanidza iyo tsvuku waya kune plug ye resistors (Ω). Iye zvino ichave iri nyaya yekubata nematipi ese eesubes pakati pemapoinzi paunoda kuyera kuramba, senge matemu maviri ekurwisa uye kukosha kuchabuda pachiratidziri.
Kusimba: yezvazvino zvanyanya kuomarara, nekuti iwe unofanirwa kuisa iwo matipi ema probes akateedzana uye haigone kuitwa zvakafanana. Zvikasadaro zvichave zvakafanana, kusarudza saizi yakakodzera uye kuisa tambo tsvuku pini A.
Mamwe ma multimeter ane mamwe mabasa kupfuura zvaizoitwa nenzira yakafanana. Uye zvakare, pane zvimwe zvine bhatani uye bhatani, ndangariro, nezvimwe. Unogona verenga bhuku racho yemhando yako kuti uwane rumwe ruzivo uye kuremekedza matanho ekuchengetedza. Chiyero chakaipa chinogona kukuvadza zvisingaverengeke iyo multimeter ...
Nzira yekusarudza multimeter
Kana iwe ukashamisika sei kusarudza multimeter, iwe unofanirwa kugara uchifunga zvinotevera mabhenefiti:
Kugadziriswa uye manhamba: chinhu chekutanga kusarudza pakati peanalogog kana dhijitari, zvinoenderana nezvamunoda, kunyangwe pachezvangu ndingakurudzira dijitari. Paunenge uchinge wajeka izvo, iwe unofanirwa kutarisa iyo resolution resolution, iyo inozoona shanduko diki diki iyo yainogona kuyera. Izvo zvirinani izvo, zvinonyanya kunetseka zvichave.
kunyatsoita- Kurongeka kwezviridzwa zvako zvekuyera kwakakoshawo. Kunyanya zvakadaro kana iwe uchida icho chekushandisa kwehunyanzvi kana kune ekushandisa uko akasiyana madiki anogona kuita shanduko huru. Izvi zvinowanzo kuyerwa mu%. Iyo yakadzikira iyo nhamba, zvirinani. Semuenzaniso, zvinogona kudaro ±. Mune ino kesi, kana iwe waida kuyera magetsi neaya akakosha eiyo 0.05 VDC chiratidzo, yako multimeter yaizoratidza kuyera kukosha pakati pe 3 na 12V, iyo pamwe chete neLSD ye11,994 zvaizoreva kuti mhedzisiro pakati pe12,006 uye 3.
RMS (TrueRMS)Iyi ndiyo imwe yemisiyano mikuru pakati pemultimeter yakachipa uye yehunyanzvi. Icho chinoreva kuyerwa kwe AC, kana muzviridzwa zvakachipa zvinofungidzirwa kuti mafomati ekushambadzira achave akakwana sinusoidal, chimwe chinhu chisiri ichocho muchokwadi, kuratidza kuverenga kusingavimbike. Muchiitiko che TrueRMS icharatidza zviyero chaizvo.
Input impedance- Ichi zvakare chakakura kusiyanisa chinhu pakati pezvakachipa nezvakaipa kubva pane zvakanaka. Kana iyo impedance yakakwira pane yekuisa, izvi zvinokanganisa kuyerwa kwemaitiro zvishoma sezvinobvira kana uchiyera. Varume vakaipa vanowanzove nazvo 1MΩ, nepo iwo akanaka angave 10MΩ kana kupfuura.
Mabasa: zvakakosha kuti iwe utore multimeter ine zvese hukuru hwaunoda kuyera nguva dzose. Vamwe vane zvimwe zvekuwedzera izvo vamwe vasina. Saka, sarudza izvo zvaunoda mune rako raunogara basa kana kuita hobby, uye sarudza iyo iine iwo ese masimba
Kana iwe uchida sarudza yakachengeteka modhi, unogona kushandisa chinyorwa ichi nezvimwe zvezvakanakisa zvaunogona kuwana, uye nemitengo yakasiyana yekuchinjira kune ese homwe uye zvinodiwa:
Fluke 115- Nyanzvi TrueRMS yedhijitari multimeter, uye iine chena LCD kuratidza kuti ishande kunyangwe mune yakakwira ambient mwenje mamiriro.
Uni-Bhora T UT71: imwe yeakanakisa nyanzvi multimeter pamusika ine dijitari LCD inoratidzira. Nekukwirira kwakanyanya uye kuvimbika.
Wedzera EX355: multimeter ine TrueRMS, zviyero chaizvo chaizvo zveDC uye AC, LoZ yekudzivirira kuverenga kwenhema nemapantom voltages, FPB yakaderera-yekupfuura firita yeiyo chaiyo kusiyanisa frequency frequency chiyero, isiri-yekubata AC voltage detector ine LED chiratidzo.
Kaiweets HT118A: TrueRMS, chaiyo chaiyo, kuwanda kwemabasa, autoranging kuyera zviri nyore uye nekukurumidza, ine NCV isiri-yekubata voltage detector, inodzivirira kune yakakura kuchengetedzeka uye kwenguva.
Kuman: yakachipa multimeter asi izvo zvinoita basa rayo. Na TrueRMS, kuwanda kwemabasa.
Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa.- Imwe isingadhuri digital kuratidza tester yezviyero zvakawanda. Yakanaka kune vanotanga uye amateurs. Iine NCV uye basa kiyi.
AoKoZo: imwe yakachipa kwazvo, asi haina kushata zvishoma. NeNVC, TrueRMS, uye zvese maficha aunotarisira kubva kudigital multimeter.
Shexton: Kana iwe uchida analogog imwe kunze kwekufungidzira kana nekuti iwe unofarira urwu rudzi rwechigadzirwa, une sarudzo yeiyi nyanzvi yepamusoro chaiyo tester.
nikou: imwe nzira yeanalogog kune yapfuura iyo. Inodhura, asi inoita basa kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chiri nyore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Zvemagetsi zvigadzirwa » Nzira yekusarudza multimeter: matipi ese aunoda kuti uzive
Yakanakisa 3D kudhinda software yevagadziri
ATX sosi: zvese zvaunoda kuti uzive